Ireo no fiheverako voalohany momba ny LG X Cam | Androidsis
LG X series Natolotra izany miaraka amina telefaona telo izay manana ny hevitra raikitra ao anaty singa fototra amin'ny fitaovana finday. Ny efijery LG X, inona no mety ho efijery miaraka amin'io ambaratonga faharoa io hahafantarana ireo fampandrenesana nefa tsy mila mamono telefaona; ny LG X Power, finday avo lenta mifantoka amin'ny batterie hahatratra roa andro tsy misy olana lehibe; ary ny LG X Cam, miaraka amin'i fakan-tsary faharoa izay mandrafitra ny toerana roa ho an'ny fakana sary miaraka amin'ny zoro 120 degre.
Noho izany, hifantoka amin'ny fahatsapana voalohany natolotry ny LG X Cam izahay, telefaona iray izay hanatanterahako fanadihadiana lalina. Ny X Cam dia miavaka amin'ny fakana sary sy ny fananany singa voalanjalanja tsara amin'ny ambiny manokana. Ny efijery dia miavaka amin'ny famirapiratany sy ny CPU octa-core izay ahafahantsika mankafy traikefa Android mahafinaritra. Andao hofantarina amin'ny alàlan'ilay horonantsary ary avy eo inona ny fiheverana navelan'ity telefaona ity tamin'ny ora voalohany nampiasana azy.
1 Ny toetra tsara sy tombony azo
2 Ny fahatsapana voalohany
Ny toetra tsara sy tombony azo
Raha vao jerena ny LG X Cam dia manana famolavolana tena mahasarika maso izay mamela antsika hifaly amin'ny famaranana. Io no fahatsapana voalohany natolony ka, amin'ny fotoana ahodinantsika azy io, dia hitantsika fa misy fikirakira roa ao anaty fakantsary izay ananany any aoriana. Ireo lentera roa ireo dia mandray ny andraikitry ny telefaona mba hahazoantsika sary tsara ary tsy ho very an-tsipiriany momba ireo trano na fivorian'ny sakaizantsika ireo izay tsy hisy afa-mandositra antsika rehefa manoratra sary izahay.
Rehefa manomboka mihodina amin'ny fitaovana ny olona rehefa mametraka fampiharana ary manandrana lalao iray hafa, ny fampisehoana azo dia tsara na aiza na aiza. Angamba ny hany maharatsy azy dia ny GPU, satria i Dan the Man, iray amin'ireo lalao mafana noforonin'i Halfbrick Studios, dia tara indraindray. ny feo manolotra ny terminal koa dia teboka iray manohana azy ary zavatra hita amin'ny horonantsary nataoko io. Mampalahelo fa tsy manome hery be loatra amin'ny sary izy, satria mety hiresaka momba ny terminal lehibe amin'ny € 299 izay mitentina (€ 269 ao amin'ny Fnac).
Izy io dia manana Android 6.0.1 ary miavaka be ny écran miaraka amin'io famirapiratana io izay ahafahantsika mahazo tombony be indrindra amin'ny karazana atiny multimedia. Ny safidy amin'ny maody famakiana efijery dia manamarika ka tsy reraka ny masontsika manafoana ny ampahany amin'ny jiro manga izay aterak'ity karazana fitaovana ity.
Noho izany, raha tsy misy fanadihadiana lalina, fahatsapana voalohany dia tena tsara, satria eo am-pelatanantsika ny telefaona izay mitentina € 299 €, fa azontsika kosa ny ampaham-bola ho an'ny zavatra aloantsika. Araka ny efa noresahiko tao amin'ny horonantsary, misy safidy hafa amin'ny vidiny ambany kokoa, fa raha avy amin'ny LG, orinasa efa tafaorina tsara eto amin'ny firenentsika, dia mihoatra noho ny ampy ny mandoa izany vola fanampiny izany azontsika itehirizana miaraka amin'ireo marika hafa.
Raha mitady telefaona izay ianao aza mihoatra ny 300 € ary tena mandanjalanja amin'ny fitambarany izy, manasongadina ny fakana sary an'io fakantsary roa io, matokia fa tena hividy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Fiheverana voalohany an'ny LG X Cam